မော်ဒယ် နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် see more… – Alanzayar
မော်ဒယ် နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် see more…
ဆရာဝန်မော်ဒယ်မလေးအဖြစ် ပရိသတ်တွေကြားမှာ လူသိများတဲ့သူတစ်ေ်ယာက်ဖြစ်တဲ့နန်းမွေစံကတော့သူမရဲ့ အမိုက်စားဘော်ဒီကောက်ကြောင်းအလှကြောင့် ပုရိသတွေကြားမှာနာမည်ကျော်တဲ့ ဆယ်လီတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ လတ်တလောမှာပဲ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်း နန်းမွေစံရဲ့ အတိတ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လူအချို့က ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဓါတ်ပုံတွေနဲ့ကောလဟာလတွေကို ဖြန့်ဝေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ တော်တော်လေး ဂယက်ရိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒေါက်တာနန်းမွေ့စံရဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာလူကြည့်များနေတဲ့ပုရိသတွေကိုပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားစေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်လေးတွေလည်းရေးပေးသွားပါဦး? crd
ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံရဲ႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ see more…
ဆရာဝန္ေမာ္ဒယ္မေလးအျဖစ္ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ လူသိမ်ားတဲ့သူတစ္ေ္ယာက္ျဖစ္တဲ့နန္းေမြစံကေတာ့သူမရဲ႕ အမိုက္စားေဘာ္ဒီေကာက္ေၾကာင္းအလွေၾကာင့္ ပုရိသေတြၾကားမွာနာမည္ေက်ာ္တဲ့ ဆယ္လီတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
သူမကေတာ့ လတ္တေလာမွာပဲ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈေၾကာင့္ ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းခံလိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာလည္း နန္းေမြစံရဲ႕ အတိတ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး လူအခ်ိဳ႕က ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွာဓါတ္ပုံေတြနဲ႔ေကာလဟာလေတြကို ျဖန႔္ေဝခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ဂယက္႐ိုက္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ေဒါက္တာနန္းေမြ႕စံရဲ႕အြန္လိုင္းေပၚမွာလူၾကည့္မ်ားေနတဲ့ပုရိသေတြကိုပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သြားေစတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးတစ္ခုကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ႀကီးရဲ႕ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္ေလးေတြလည္းေရးေပးသြားပါဦး? crd
Previous Article သိန္း (၂၀)တန္ အခ်စ္ဆိုလားပဲဗ်ာ see more…
Next Article သရုပ်ဆောင်နေတိုး ငယ်ချစ်ဦးနဲ့ အမြန်လက်ထက်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း